Imbali yeByroot Beer kunye ne-Inventor uCharles Hires
Ngowe-1876, uCharles Hires waqala ukuthengisa ibhiya yentengiso kwi-public.
Umsi wobisi uvela kulokho ekubhekiselwe kuyo njengezinyosi ezincinci. Iibhiya ezincinci ziqokelela izixhobo zokusela izidaka zasekhaya (ezinye izidakwa, ezinye azikho) zenziwa ngexesha leenkoloni eMelika ezivela kwiintlobo ezahlukeneyo zityalo, iintsimbi kunye neengcambu eziqhelekileyo zibandakanya: i-birch ubhiya, ubhiya we-sarsaparilla, ubhiya we-ginger kunye ne-berry ingcambu.
Izithako kwiibhere zangaphambili ziquka i-allspice, i-birch bark, i-coriander, i-juniper, i-ginger, i-wintergreen, i-hops, ingcambu ye-burdock, i-dandelion ingcambu, i-spikenard, i-pipsissewa, i-dailion, i-sarsaparilla, i-spicewood, i-cherry bark, i-dock, i-sassafras ingcambu, iimbotyi, i-hops, i-hops, inja yengca, i-molasses ne-licorice.
Izimbalwa ezininzi zingentla zizisetyenzisiwe kwiingcambu zebhiya namhlanje kunye ne-carbonation eyongeziweyo. Akukho namnye iresiphi.
UCharles Hires wayengumkhemikhali waseFiladelphia owathi ngokwemvelo yakhe wathola i-recipient yeeti enomsoco we-herbal ngexesha lakhe lokutshata. I-pharmist yaqala ukuthengisa ingoma eyomileyo yongxube weeyi kwaye yaqala ukusebenza kwinguqu ekhethiweyo yeeyi efanayo. Isiphumo saso sidibaniselwano sama-herbs angamashumi amabini anesihlanu, ama-berries, kunye neengcambu ezazisetyenziswa nguCharles Hires ukunambitha i-carbonated soda siselo zamanzi. Ingqungquthela kaCharles Hires ye-berry isiphuzo sotywala saqale saziswa kuluntu kwi-1876 ye-Philadelphia Centennial umboniso.
Bottling yo kuqala
Iintsapho zeeHires zaqhubeka nokuvelisa ubisi kwintsimbi kwaye ngo-1893 zithengiswa kuqala zaza zahambisa ubhiya webhotile. UCharles Hires kunye nentsapho yakhe babenegalelo elikhulu ekuthandweni kwebhiya yenkomo yangomhla, nangona kunjalo, imvelaphi yebhiya ingaphinda ilandelwe emva kwimbali.
Olunye uphawu oludumileyo lwenkcenkceshelo yobhiya yi-A & W Root Beer, ngoku i-number one ithengisa ubhiya kwihlabathi. I-A & W i-Root Beer yasungulwa nguRoy Allen, owaqala ukuthengisa ubhiya wezonzi ngo-1919.
* Ngo-1960, i-US Food and Drug Administration ivimbele i-sassafras njenge-carcinogen, kodwa, kwatholakala indlela yokususa ioli kwi-sassafras.
Ioli kuphela ibonwa njengengozi. I-Sassafras yenye yezona zithako eziphambili kwiingcambu zebhiya.
Qaphela kwakhona: Umda wee-Soft Drinks
Imfazwe Yehlabathi II: I-Compass Operation
'I-Gray's Anatomy' Ixesha le-6 I-Synopsis